Topnepalnews.com | शुभकामना ! विश्वकप छनोट जित्ने लक्ष्य सहित नेपाली टोली जिम्बावे प्रस्थान
शुभकामना ! विश्वकप छनोट जित्ने लक्ष्य सहित नेपाली टोली जिम्बावे प्रस्थान
Posted on: February 25, 2018 | views: 8011
सुपर सिक्समा पर्ने लक्ष्य सहित एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनोट खेल्न नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरू शनिबार राति जिम्बाम्बे प्रस्थान गरेका छन् ।
दुईब हुँदै नेपाली टोली भोलि साँझ जिम्बावे पुग्नेछ। आगामी फागुन २० गतेदेखि जिम्बावेमा सुरू हुने आइसिसी विश्वकप छनोटमा नेपालले बलिया टोलीबिरूद्ध प्रतिश्पर्धा गर्नेछ।
१० राष्ट्रको सहभागिता रहेको विश्व कप छनोटमा नेपाल समूह बीमा छ। नेपालले समूह चरणमा टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र आयोजक जिम्बावे, अफगानिस्तानसँगै स्कटल्यान्ड र हङकङको सामना गर्नुपर्नेछ। राउन्ड रोविन लिगपछि समूहका शीर्ष तीन टोली सुपर सिक्समा प्रवेश गर्नेछन्। अर्को समूहमा आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, पपुवा न्युगिनी, वेस्ट इन्डिज र युएई छन् ।
हालै नामिबियामा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ को फाइनल पुगेको नेपालसँगै युईएले छनोटमा स्थान बनाएका हुन्। सुपर सिक्समा पुग्ने टोलीले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सुपर सिक्स पुग्ने टोलीले इन्टर कन्टिनेन्टल कप र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप पनि खेल्न पाउनेछन्।
विश्वकप छनोटअघि नेपालले दुई अभ्यास खेल खेल्नेछ। युएईसँग मंगलबार प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालले फागुन १७ मा हङकङको सामना गर्नेछ।